Fikarohana momba ny firaisana George Clooney amin'ny fampanangarena ny Clark Gable sy Amal Clooney ho fampisehoana indray ao Loretta Young-Amin'ny maha Drus azy, moa ve manaiky ny firaisana amin'ny vatana vaovao i Amal? - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
George Clooney Reincarnation Case Tolotra: Ishtar Ishaya
Tranga Reincarnation an'ny Amal Clooney naroson'i: Walter Semkiw, MD
Ny namako akaiky ahy, Ishtar Ishaya, dia nanolotra fanadihadiana maromaro momba ny fanambadiana vitsivitsy izay nohamafisin'ny mpitari-dalana an'i Ahtun Re, izay nampidirina tamin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao tranainy Kevin Ryerson. Niara-niasa tamin'i Kevin hatramin'ny 2001 aho ary nandritra ny vanim-potoana, i Ahtun Re dia naneho ny fahaizana mametraka ny lalao miaina amin'ny alàlan'ny fepetra marina.
Nanolotra izany i Ishtar George Clooney dia ny firaisan'ny vatana indray Clark Gable. Raha izany no izy dia nanontany tena aho hoe iza Vadin'i Clooney, Amal, mety ho nifandray tamin'ny Gable. Hitako fa nitovitovy ny fitoviana teo amin'i Amal sy ilay mpilalao sarimihetsika Loretta Young. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Clark Gable sy Loretta Young dia manana zaza tsy ampy taona
Clark Gable ary Loretta Young no kintan'ny filma 1935 Ny Antsoan'ny Wild. Gable dia 34 taona tamin'io fotoana io ary i Young dia 22. Nandritra ny famokarana ity sarimihetsika ity dia nanolotra an'i Young i Gable izay nanatitra zazavavy kely tatỳ aoriana. Gable raha nanambady tamin'izany fotoana izany. Na dia nihevitra aza izy ireo fa tamin'ny roa taona teo ho eo dia niombon-kevitra tamin'ny alalan'ny fifanarahana izy ireo, taty aoriana dia nanambara i Young fa nanery azy i Gable.
Ny olana iray momba ny lalao napetraka eo amin'i Loretta Young sy i Amal Clooney dia ny nahafatesan'i Young tany Santa Monica tamin'ny taona 2000, raha teraka tany Liban kosa i Amal tamin'ny 1978, anelanelan'ny 22 taona. Raha marina io tranga io, dia maneho ohatra iray amin'ny antsoiko hoe "nizarazara ho nofo", araka ny ambaran'ny fanahy mihoatra ny vatana iray isaky ny mandeha.
Misy porofo, anisan'izany ny avy amin'ny Oniversiten'i Virginie, izay mitranga ny fahaterahana vao tonga. Ian Stevenson, MD, avy ao amin'ny Oniversiten'i Virginia, dia nantsoina hoe "tranga miaraka amin'ny daty tsy fanao", toy ny androm-piainan'ny olona. Ny iray amin'ireo tranga mahery indrindra navoakan'i Stevenson, izay namotika ny famonoan-tena tamin'ny andro teo aloha, dia mampiseho ny fisarahana indray. Mba hamerenana ity tranga ity, azafady mankany:
Tantaram-piainana taloha momba ny famonoan-tena, Karma, ny fahaizan'ny fiainana taloha sy ny fitomboan'ny taonjato maromaro: ny trangam-panjakan'i Ginea indray i Helmut Kohler | Ruprecht Schultz
Ny tranga momba ny Reincarnation misy ny mpanoratra Penney Peirce dia nampiseho ny taonan'ny 29 nandritra ny androm-piainany. Mba hamerenana ireo tranga ireo, azafady mankany:
Famerenana ny Fahavelona sy ny Fijangajangana ao amin'ny Zandriny any Penney Peirce
Tamin'ny fivoriana niarahany tamin'i Kevin Ryerson, dia nanamafy i Ahtun Re fa Clark Gable i George Clooney nandritra ny androm-piainany taloha ary i Amal Clooney no toeran'i Loretta Young.
Ny mahaliana, ny dadan'i Amal dia avy amin'ny tarika foko Druze, izay manaiky ny fotopampianarana momba ny vatana vaovao indray. Izany dia manontany ny amin'ny hoe mino ve i Amal na mbola misokatra amin'ny fiverenan'ny vatana vaovao indray vao teraka. Ny trangam-pianakaviana iray any Druze dia navoaka tao amin'ny tranokalanay izay manome ny fomba fijery ny olona sy ny jeografia an'i Libanona sy Syria. Mba hamerenana ity tranga ity, azafady mankany:
Ny raharaha momba ny fanambadiana gasy amin'i Hasan Hamed | Salem Andary: Novonoina tany Syria ary novonoina tany Liban ny Druze
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy ny fifehezana amin'ny endriky ny endrika Gable | George Clooney sy Young | Amal Clooney.
Manamboatra fotoana ampy hanavaozana ny fifandraisana: Voalaza fa noterena hiasa tao Loretta Young i Clark Gable, izay nahatonga ny bevohoka. Amin'ny fanorenana indray ny fanambadiana sy ny fanambadiana ao amin'i George sy i Amal Clooney, dia azo sitranina ny trauma avy amin'ny fifandraisana amin'i Gable sy Young.
Ny fiainana taloha talenta: Ny talenta napetrak'i Clark Gable dia mamirapiratra amin'ny asan'i George Clooney. Mpisolovava i Amal Clooney, fa tsy mpilalao sarimihetsika, fa mahafinaritra izy ary mendrika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, tahaka an'i Loretta Young.
Ny fihenam-bidy: Araka ny voalaza, ny androm-piainan'i Loretta Young sy i Amal Clooney dia nopotehan'ny 22 taona, tranga iray izay antsoiko hoe fizaham-pahasalamana, izay fantatra amin'ny alàlan'ny fe-potoam-piasana farany.